Vaovao - Nisokatra ny tsena tao Yiwu
Nisokatra ny tsena tao Yiwu
Taorian'ny nisokafan'ny tsena lehibe an'i yiwu, dia nandoka mivantana ny tsena ireo olo-malaza sasany, tompona fivarotana sasany, mpanampy mpivarotra mivantana amin'ny ady, lasa vatofantsika ireo mpivarotra, nanao «fandresena» mivantana ny olo-malaza an-tranonkala, lasa onja mafana tao amin'ny tsena yiwu.
Mba hampiroboroboana ny fampidirana an-tserasera sy an-tserasera, nikarakara hetsika toy ny "e-varotra an-tsena", "entana marina an-tserasera", "fandefasana olo-malaza mivantana loharano mafana", "fampirantiana an-tserasera", sns. ny e-varotra ao an-tanàna mankany amin'ny tsena, ary nanatanteraka ny fisafidianana ireo vokatra, baiko ary fivarotana an-tserasera. Ireo mpandraharaha tsena dia nanangana magazay amin'ny sehatra e-varotra hanitarana ny tsena an-tserasera.
Misarika ny sehatra fampielezam-peo mivantana ny tanànantsika, masoivohon'ny serivisy malaza amin'ny tranonkala ary olo-malaza amin'ny tranonkala yiwu, hanatanteraka fampielezam-peo mivantana amin'ny hetsika entana, sehatra fampitana mivantana fanta-daza, ambaratongan'ny masoivohon'ny serivisy malaza amin'ny tranonkala, miaraka amin'ny onjan'ny " olo-malaza amin'ny tranonkala ", amin'ny hetra, fividianana talenta, sekoly ho fanampiana ankizy. Ny vondrona mall dia 25000 metatra toradroa an'ny "afovoany", ao amin'ny valan-javaboary indostrialy velona malaza. Eo ambany fitarihan'ny politika, manova mavitrika ny fomba fiasa, "olo-malaza amin'ny tranokala" miaraka amin'ny entana ny mpivarotra tsena, ary miroborobo kokoa.
"Ao anatin'ny vanim-potoana manokana amin'ny valan'aretina, zava-dehibe indrindra ny fitarihana ireo mpandraharaha hanokatra fantsona vaovao toy ny fandefasana mivantana an-tserasera, hanafainganana ny fiverenan'ny mpividy ary hampitombo ny fahatokisan'ny tsena." Ny tompon'andraikitra amin'ny vondrona fivarotana dia nilaza fa ny valanaretina dia nanery ny tompona orinasa hanafaingana ny fiovana, "ny fihemorana amin'ny fanondranana varotra ivelany, mpivarotra maro no nampitombo ny fanitarana ny tsena anatiny. Ny sasany amin'izy ireo dia nanao ambongadiny fotsiny, fa ankehitriny manomboka mifantoka amin'ity fomba fandefasana mivantana mivantana an-tserasera ity. "
Fotoana fandefasana: Jul-02-2020